TechPoint Mira ဆုအတွက်ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုရွေးချယ်! | Martech Zone
ငါနှင့်နီးကပ်စွာပေါင်းသင်းနေသောကုမ္ပဏီသုံးခုကိုနောက်ဆုံးရွေးချယ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည် Indiana ပြည်နယ်၏ Mira ဆုများ:
ExactTarget - ၎င်းသည်ကြီးထွားမှုနှင့်စိတ်ချရသော ဦး ဆောင်မှုနှင့်အတူဤကုမ္ပဏီသည်ထိုက်တန်သောဆုကိုရရှိမည်မှာသေချာသည်။ ရူပဗေဒနိယာမများကိုအီးမေးလ်များမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်မည်ကဲ့သို့ပို့နိုင်သည်ဆိုသည်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားသည့် ExactTarget စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ ငါ ExactTarget အလုပ်လုပ်ခဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကိုချစ်၏
တနင်္လာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းကိုနှစ်သက်သည် Scott Dorsey၊ ExactTarget ဥက္ကPresident္ဌ, ငါဘယ်တော့မှမထားဘူးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူကအားသွန်ခွန်စိုက်အကောင်းမြင်သူအမြဲပြုံးနေခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုတွေ့ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုလျှင်သူသည်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်မည်သူမည်မျှကောင်းသည်ကိုပြသခြင်းအတွက်သက်သေဖြစ်သည်။
Patronpath ၌ကျွန်ုပ်၏ရာထူးသစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည် ExactTarget နှင့်အနည်းငယ်အတော်လေးအလုပ်လုပ်ကိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်အပြည့်အ ၀ ဆက်သွယ်ပြီးသည်နှင့် ExactTarget ၏အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းအကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကောင့်အတွက် ExactTarget သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိတ်ကြိုက်အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်မြေခံကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားအီးမေးလ်များကိုပေးပို့နိုင်ပြီးကိုယ်စားလှယ်များအား၎င်းတို့ဖောက်သည်များ၏အကျိုးစီးပွားများကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ အစီရင်ခံစာတစ်ခုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ExactTarget တွင်အသင်းဖော်ဟောင်းများရှိနေခြင်းကအလွန်ကောင်းပါသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဖောက်သည်များ၏အခန်းကဏ္ to မှပြောင်းရွှေ့နေတဲ့တော်တော်အဖိုးတန်ကုန်စည်ဖြစ်ပါတယ်။ (ကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးမှုမတိုင်မီကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုများကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါစေ။ )
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ExactTarget တွင်အေဂျင်စီအကောင့်တစ်ခုရှိပြီးစားသောက်ဆိုင်များအတွက်အစွမ်းထက်။ အလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှုရှိသည်။ ညစဉ်ညတိုင်းအခြေခံအားဖြင့်စားသောက်ဆိုင်မှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အားဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမျှသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည့်မွေးနေ့၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ X နေ့ရက်များအတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ X ဒေါ်လာထက်ပိုသော ၀ ယ်ယူမှုများစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်စားသောက်ဆိုင်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းယန္တရားဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၂ Super Bowl ကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငါက၊ WordPress ကို plugin ExactTarget မှတဆင့် WordPress ဘလော့ဂ်ကနေအလိုအလျောက် subscriptions ကိုသည်။ အခု ၈၀% ပြည့်စုံပြီ။ ငါအလိုအလျောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ cron အလုပ်။
Compendium Blogware - Chris Baggott သည် ExactTarget တွင်ရှိနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘလော့ဂ်အပလီကေးရှင်းများအားအကြောင်းအရာများကိုအမှန်တကယ်အသုံးချရန်နှင့် Search Engine Optimization အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ်မှတ်ထားရန်အခွင့်အလမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
ငါ့သားက IUPUI မှာစပြီး Chris ကိုမေးတဲ့အခါငါ Compendium ပေါ်တက်ခုန်မသွားနိုင်ဘူး။ ဒါဟာငါ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒေါသတကြီးနဲ့အနည်းငယ်မနာလိုမှုတွေနဲ့အတူငါ Chris နှင့် Ali Sales Compendium ကိုစျေးကွက်သို့ယူလာသည်ကိုကြည့်ပြီးထိုင်ကြည့်ခဲ့ရသည်။ မှတ်ချက် - Ali Sales သည် ExactTarget နှင့် ChaCha ၏စတင်မှုသမိုင်းတွင်လည်းအရေးပါခဲ့သည်။ ChaCha ကိုလည်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။
စနေနေ့ Starbucks ရဲ့ပထမဆုံးစနေနေ့အစည်းအဝေးတွေမှာငါတို့စီးပွားရေးကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့တာကိုတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဒီနေရာမှာအစောပိုင်းအင်တာဗျူးပါ Compendium အကြောင်းပြောသောခရစ်:
Compendium သည်ဒုတိယအကြိမ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုပြုလုပ်နေပြီးအလွန်လျှင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ Search Engine များ၏ပေါင်းစပ်မှုနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများ blogging ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထိရောက်မှုသည်ယခုအချိန်တွင်ပူပြင်းနေပြီး Compendium သည်ရှေ့တန်းတွင်ရှိသည်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကခရစ်နှင့်အတူနေဖြင့်ရပ်တန့်နှင့်သူ၏ထုတ်ကုန်များအတွက်နောက်ထပ်နှစ်ခုအတွေးအခေါ်များပစ်ချ၏။
ခရစ်ဟာကျွန်တော့်အတွက်ကြီးမားတဲ့လမ်းညွှန်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုအလီလည်းလှုံ့ဆော်မှုပေးတဲ့သမ္မတတစ် ဦး ပါ။ သူတို့မကြာခင်ကျွန်တော်စတင်တော့မှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Compendium ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်“ Blogger, WordPress, Typepad စသည်ဖြင့်ဘာကြောင့်မသုံးသင့်တာလဲ” ဟုသင့်အားအသိပေးနိူင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းလုပ်နိုင်တယ် Compendium's Newsletter အတွက်စာရင်းသွင်းပါ အခမဲ့ iPod Touch ကိုအနိုင်ရပါ။
Patronpath - စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှု - နောက်ဆုံးသော်လည်းအနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအလုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Patronpath သည်ယခုအခါတွင်ဂဏန်းသုံးဆတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ စားသောက်ဆိုင်များသည်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ညစာစားခြင်းအတွက်နံပါတ်များလျှော့ချခြင်းတို့ကြောင့်သူတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်များကိုညှစ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကြံ့ခိုင်ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းမှမှာယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့အားအနီရောင်မှအနက်ရောင်သို့တိုက်ရိုက်ပေါက်ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကောင်းမွန်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်ကောင်းမွန်သော site development ကိုအသုံးချရန်သေချာစွာအာရုံစိုက်သည်။ အွန်လိုင်းမှာယူမှုသည်မလုံလောက်ပါ။ အွန်လိုင်းတွင်မှာကြားခြင်းကိုသင်ရှာရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုအများစုသည်လွဲချော်နေသောအချက်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၈ လအတွင်း PUS စနစ် ၄ ခုနှင့်ခိုင်မာသည့် callcenter ပေါင်းစည်းမှုကိုပေါင်းစည်းခဲ့ပြီးစွန့်ခွာမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ interface ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အတွက် turnkey အမျိုးသားအီးမေးလ်သတင်းလွှာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ExactTarget လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်ဖော်ပြထားသည်) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားပြပွဲတစ်ခုတွင်အဓိကကွင်းဆက်သည်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်ခုတည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါကအင်္ဂါရပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ယှဉ်ပြိုင်လကြာခဲ့သည်။ အခုကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာစည်တွေတောက်ပနေတယ်။
Patronpath သည်ပြင်းထန်စွာကြီးထွားလာနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အလိုအလျောက်တွန်းအားပေးနေပြီး Bluelock ရှိအနုပညာ virtualized ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုအရှိန်မြှင့်တွန်းအားပေးနေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (နိုင်ငံတကာတွင်) ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့် ace development partner ရရှိထားပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဓိကအင်အားဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်၊ အီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်ရေးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ စားသောက်ဆိုင်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်မလုံလောက်ပါ။
မကြာသေးမီကလည်းပေါင်းစည်းခြင်းသို့ Marty Bird ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပြီးပါပြီ မာတီသည်တံခါးဝသို့ဝင်သောအခါသူသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ပမာဏ၏ ၆၀% ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသည်။ သူ၏တိုးတက်မှုနှင့်နည်းဗျူဟာများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မောင်းနှင်မှုသည် Patronpath ၌ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အတိအကျဖြစ်သည်!
မှတ်ချက် - လျစ်လျူရှုပါ နာယက ဆိုဒ် - ယခုလတွင်အသစ်တစ်ခုရရှိမည်
ငါပေါင်းထည့်ရမယ်ဒီကုမ္ပဏီသုံးခုအကြားတစ်ခုတည်းသောဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီရှိကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ် ထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ် - Kristian Andersen ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် နှင့်အဖွဲ့။ Kristian ဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူနဲ့ငါအလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့အခြားအေဂျင်စီတွေ၊ Kristian သည်ကုမ္ပဏီငယ်များအားကြီးထွားရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်သူလုပ်နိုင်ရန်ဒေသတွင်း၌မယုံကြည်နိုင်လောက်သောအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ခဲ့သည်။ သူလည်းသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ။
Tags: emarketingemarketing အသင်းအဖွဲ့facebook ကြော်ငြာLas VegasMiloအွန်လိုင်းညီလာခံသုတေသန pewဆုံးဖြတ်ချက်တွေသေးငယ် Indiana ပြည်နယ်startup နင်္ဂနွေပိတ်ရက်နည်းပညာအလုပ်